အသစ်အသစ်သော ခံစားမှုတွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် Dimensions!! - MoviesFan
အသစ်အသစ်သော ခံစားမှုတွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် Dimensions!!
ဒီနေ့မှာတော့ သိပ်မကြာခင်ရက်အတွင်းမှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသစ် Dimensions (မျက်နှာပြင်များ) ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးအကြောင်း သတင်းပေးချင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပါတ်သုံးပါတ်လောက်မှာ သိပ်ကိုလူပြောများခဲ့တဲ့ Deception (ဉပါယ်တံမျဉ်) ဆိုတဲ့ ကားနဲ့ အပြိုင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဒီ dimensions ဇာတ်ကားဟာလဲ ဒါရိုက်တာအသစ်က သရုပ်ဆောင်အသစ်တွေကို ပွဲထုတ်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Dimensions ဇာတ်ကားရဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသားဖြစ်တဲ့ ခါရာကတော့ မြန်မာပရိသတ်နဲ့ သိပ်မစိမ်းတဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်လ်တစ်ဦးပါ။ သူ့ပရိသတ်ကရော သူ့ကို ဝန်းရံကြပါ့မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Dimension ဇာတ်ကားအတွက် press show ကိုတော့ ဒီနေ့ (၅.၂.၂၀၁၈) Mega Ace Cineplex (Capital Hypermarket/သာကေတ) မှာ အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ရက်နေ့မှာတော့ Dimensions ရဲ့ Premiere Screening၊ Red Carpet Show ပြုလုပ်မယ့်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ Dimensions ရဲ့ official facebook page မှာလဲ ပရိသတ်တွေ ဒီ Red Carpet Show တက်ရောက်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးအနေနဲ့ #DimensionsTrailerReact campaign လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်။ Dimensions trailer ကြည့်ပြီး ကိုယ်ဘယ်လိုရင်ခုန်ခံစားရတယ်ဆိုတာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ #DimensionsTrailerReact ဆိုတဲ့ hashtag လေးနဲ့ post တင်ပေးရုံနဲ့ Red Carpet Show ကိုတက်ဖို့ လက်မှတ်၂စောင်ကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး ကံထူးသူ ၅ယောက်ထိရွေးချယ်မှာဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားပါတယ်။ Trailer react video တင်ချင်တဲ့သူတွေကတော့ ၆ရက် နေ့ထိတင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။
ဒီအက်ရှင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို Mega Ace Cineplex နဲ့ JCGV တို့မှာ ၉ရက်နေ့ကစပြီး ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာကတော့ လူငယ်ဒါရိုက်တာဉာဏ်ထင် ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေအနေနဲ့ ခါရာ၊ မင်းမြတ်စိုးစံ၊ဂျာဆိုင်းအိန်နဲ့ Alice Ong တို့ပါဝင်ပြီး သီဟ၊ ကောင်းစစ်သွေး၊ ဆုရွှေရည်ထူး၊ ဦးဝင်းမြိုင်နဲ့ ရဲမွန်တို့လဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။
Bonanza Production နဲ့ Shutter Production တို့ ပူးပေါင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို အချိန် ၂နှစ်နီးပါးယူပြီးရိုက်ကူးထားတာပါ။ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ရော၊ သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို အကဲဖြတ်ဝေဖန်ပေးနိုင်ဖို့ရယ် ရုံတင်တဲ့ချိန်မှာ သွားပြီးကြည့်သင့်တဲ့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုဖြစ်တာမို့ အချိန်မှီ သတင်းပေးလိုက်တယ်နော်။
ကဲ သူဘာကြောင့် လူတွေလိုက်သတ်နေရတာလဲ???? သိချင်ကြပြီလား??? နောက်သုံးလေးရက်ဆို သိရပြီနော်။
Source : www.facebook.com/DimensionsMovie
Previous Post: ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့မှာ ချစ်စရာသမီးကလေးမွေးခဲ့တဲ့ Kylie Jenner
Next Post: မကြာမီထွက်မယ့် ‘Black Panther’ ရုပ်ရှင်ရဲ့ Rotten Tomatoes ရမှတ်ကို လျှော့နည်းအောင်ကြံဆောင်တဲ့ Group ကို Facebook ကဖျက်သိမ်း